नेविसंघलाई थर्काउँदै देउवाले सोधे, ‘म चारपटक प्रधानमन्त्री भएँ, तपाईंहरू सक्नुहुन्छ ?’ – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१३ मंसिर २०७७, शनिबार १७:४५ English
काठमाडौँ, १९ असार । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरुलाई थर्काएका छन् । विद्यालयहरूमा नेविसंघ कमिटि गठन नगरेको तर शहरमा बसेर भाषण मात्रै गर्ने गरेको भन्दै सभापति देउवाले थर्काएका हुन् । पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९६ औं जन्मजयन्तीमा नेविसंघले शान्तिबाटिकामा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा देउवाले कोरोना महामारीको बेलामा किन कार्यक्रम राखेको भन्दै प्रन पनि गरेका थिए ।
‘सोसल डिस्ट्यान्सिङ भन्या छ, तर यहाँ टाँस्सेर बसिरहेको छ,’ देउवाले भने, ‘अहिले यो खतरा रोग आएको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नुस् । टाँस्सेर बसेर केही हुनेवाला छैन ।’
उनले थपे, ‘कहिलेकाहीँ कार्यक्रम नगरे पनि हुन्छ । गर्नै परे अलि फराकिलो ठाउँमा गर्नुपर्‍यो, अहिलेको बेला सबैले कार्यक्रम गर्न छाडिसकेका छन् । हामीले मात्रै गर्नुपर्ने ? बढ्ता हुनुपर्ने ? भाषण गर्नैपर्ने ?, विद्यार्थीलाई बोकेर भेला गराएर भाषण गरिहाल्नुपर्ने ?, बढ्ता जान्ने भइहाल्नुपर्ने ?’
छ महिनामा नेविसंघको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहित राजीव ढुंगानाको नेतृत्वमा नेविसंघ गठन गरिएको भएपनि कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत केन्द्रीय समितिले नै पूर्णता पाएको छैन । यस विषयमा सभापति देउवाले आन्तरिक झगडामा अल्झिएका कारण समस्या आएको बताए ।
देउवाले फागुनमा हुने पार्टीको महाधिवेशनपछि नेविसंघले पूर्णता पाउने पनि बताए। ‘नेविसंघको पूर्णता महाधिवेशनलगत्तै हुन्छ,’ उनले भने ।
‘विद्यार्थी आपसमा मिलेको भए समस्या नै हुने थिएन, आफैं झगडा गर्या गर्यै छन्’ देउवाले भने, ‘म नेविसंघ सभापति हो, चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेँ, यस्तै हिसाबले तपाईंहरू कोही चारपटक प्रधानमन्त्री हुन सक्नु हुन्छ ? लाज पनि छैन ।’
सभापति देउवाले नेविसंघले गाउँगाउँमा गएर संगठन नबनाउँदा काँग्रेसको हालत खराब भएको पनि बताए । देउवा २०२७ सालमा नेविसंघ सभापति भएका देउवाले त्यसबेलाको कुरा निकाल्नै भने, ‘नेविसंघलाई बलियो बनाउनुस् । जहाँ पनि हारेको छ, लाज पनि छैन ।’ आक्रोशित देखिएका देउवाले प्रश्न मात्रै गरिरहे, ‘कहाँ छ नेविसंघ ? गाउँमा छ ? स्कुलहरूमा छ ?’
पहिलेका नेविसंघ सभापतिहरूलाई पनि आफूले गाउँमा गएर संगठन बढाउन आग्रह गर्दा पनि अटेर गर्ने गरेको सम्झिँदै भने, ‘पहिलेका सभापतिलाई पनि भने ए बाबा गाउँमा जाऊ, नेविसंघ बलियो बनाऊ, गाउँ जाँदैनन् । संगठन बनाउँदै बनाउँदैनन् । हारेको छ हारेको छ । सबै कम्युनिष्टले जितेको छ ।’
१९ असार २०७७, शुक्रबार १६:४९ मा प्रकाशित